नेकपाकै सांसदले मागे सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा ! – Life Nepali
नेकपाकै सांसदले मागे सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा !
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै सांसदले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा भएको छलफलमा नेकपा सांसद सुदन किँरातीले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामाको माग गरे। ‘सरकारका प्रवक्ताले मिलेनियम च्यालेञ्ज क’र्पोरेशन (एमसिसी) जु’नसुकै ‘पास हुन्छ। चाह्यो भने देशका नेताहरुलाई अमेरिकाले सुलेमानी बनाइदिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ’, उनले भने।
राष्ट्रियता स्वा’धिनतामाथि आफ्नै सरकारका प्रवक्ताले ग्रहण लगाउन खोजेको उनको आरोप छ। सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्ति लेण्डुप दोर्जे प्रवृतिको भएको भन्दै उनले आ’पत्ति जनाए । ‘ले’ण्डुप दोर्जे प्रवृति आ’त्मसमर्पण प्रवृतिकोविरुद्धमा आ’पत्ति प्र’कट गर्न चा’हान्छु र उ’हाँले नैतिकताका आ’धारमा रा’जीनामा दिनुपर्छ। यो विषयमा समिति र सबैको ध्या’नाकर्षण गर्न चा’हान्छु’, उनले भने। प्र’वक्ता बा’टाले एमसीसीको वि’षयमा गत बि’हीबार ग’लत हल्ला फैलाइएको बताउँदै भनेका थिए,
‘अमेरिकाले चा’ह्यो भने जुनसुकै कुनामा पनि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्छ। नेपालमा बेस क्याम्प राख्नुपर्ने अ’वश्यकता पर्दैन। अस्ति इरानमा दे’ख्नुभएन कसलाई हानेको?’ सांसद भीम रावलले एमसीसीको विषयलाई धेरैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर राष्ट्रहित र स्वा’र्थभन्दा निजी धा’रणा राख्ने गरेको बताए। राष्ट्रियहितमा हुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रावलले समितिमा ग’हन अ’ध्ययनको आ’वश्यकता औं’ल्याए।
Previous नेपाली भाषालाई कमजारेर बनाउने गरि अंग्रेजी प्रयोगमा रोक लगाउनु पर्छ : शिक्षा मन्त्री
Next सरकारको काम हेर्दा अर्कोपटक नेकपाले दुईतिहाइ ल्याउनबाट कसैले रो’क्दैन : प्रधानमन्त्री ओली